Vaovao - Machining Thread
Ny fanodinana ny kofehy dia ny fampiasana fitaovana fanodinana kofehy hanodinana fomba isan-karazany ao anaty sy ivelany.
Voalohany, fanapahana kofehy
Amin'ny ankapobeny dia manondro ny fomba fanodinana kofehy eo amin'ny workpiece misy fitaovana fananganana na abrasive, indrindra ao anatin'izany ny famadihana, ny fikosoham-bary, ny fikikisana ny fametahana tariby, ny fikolokoloana ary ny fanapahana ny sikika, sns. fa ny fitaovana fihodinam-bokatra, ny fikosoham-bary na ny kodia fikosoham-bary dia mampihetsika ny fitarihana iray marina sy mifanaraka amin'ny lalana axial an'ny sangan'asa isaky ny revolisiona ny sangan'asa.
Rehefa mikitika na mametraka ny tariby, ny fitaovana fanapahana (paompy na maty) ary ny fitaovana fiasana ho an'ny fihodinana, ary ny noforonin'ny kofehy voalohany dia mitarika ny fanapahana (na ny sangan'asa) ho an'ny hetsika axial.
Roa. Mihodina ny kofehy
Ny fanapahana kofehy amin'ny latina dia azo atao amin'ny alàlan'ny fitaovana famolavolana na kofehy vita amin'ny kofehy. Ny fikajiana kofehy miaraka amina fananganana fitaovana dia fomba iray mahazatra amin'ny famokarana singa tokana sy famokarana bitika kely vita amin'ny kofehy noho ny firafiny tsotra. kofehy, avo ny fahombiazan'ny famokarana, saingy sarotra ny firafitry ny fitaovana, mety ihany ho an'ny salantsalany, famokarana betsaka ny fihodinanan'ny nify tsara vita amin'ny kofehy fohy. JB2886-81, mitovy etsy ambany ihany) .Ny kofehy dia azo ampiasaina amin'ny latina misy kofehy manokana miaraka amina famokarana avo lenta na avo kokoa.
Ny fikosoham-bary amin'ny milina fikosoham-bary miaraka amin'ny fanapahana kapila na ny fanapahana volo. kofehy, noho ny fampiasana fanapahana fikosoham-baravarankely, ny halavan'ny ampahan'ny miasa dia lehibe kokoa noho ny halavan'ny kofehy, ka ny rotaka dia tsy mila mihodina afa-tsy 1,25 ~ 1,5 revolisiona azo ahodina, mamokatra be.
Ny marim-pototra ataon'ny fikosoham-bary dia mety hahatratra 8 ~ 9 isa, ary ny hatevin'ny tany dia R5 ~ 0.63 micron. Ity fomba ity dia mety amin'ny famokarana betsaka ny sanganasan'ny kofehy vita amin'ny kofehy ankapobeny na ny milina matevina alohan'ny fitotoana.
Efatra, fitotoana kofehy
Ampiasaina indrindra ho an'ny masinin-jiro masinina vita amin'ny asa-kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy. Izy io dia azo zaraina ho kodiarana fitotoana tariby sy kodiarana fitotoana tariby maromaro arakaraka ny endrika isehoan'ny kodiarana fitotoana. Ny kodiarana fitotoana tariby tokana dia mety hahatratra ny haavon'ny 5 ~ 6, ny fahasarotan'ny R1.25 ~ 0,08 micron, Ny fomba fitondra amin'ny kodiarana dia mora kokoa. Ity fomba ity dia mety amin'ny fikosoham-bolo, ny fandrefesana ny kofehy, ny kankana, ny kofehy kely ary ny fikosoham-bolo. roa. Amin'ny fomba fitotoana lava, ny sakan'ny kodia fikosoham-bary dia kely kokoa noho ny halavan'ny kofehy hatao tany. Ny kodiarana fitotoam-bary dia afaka mivezivezy ny kofehy amin'ny habeny farany amin'ny alàlan'ny famindrana ny kodiarana fitotoana indray mandeha na indray mandeha maromaro. Amin'ny fomba fanapahana fanapahana dia lehibe kokoa noho ny halavan'ny kofehy fitotoana ny sakany. Ny kodiarana fitotoam-bary dia voakapa ho etỳ ambonin'ny sehatry ny workpiece amin'ny làlan-kizorana, ary ny fikosoham-bary dia azo esorina amin'ny revolisiona manodidina ny 1,25. Avo kokoa ny famokarana, saingy somary ambany kokoa ny marin-toerana, ary sarotra kokoa ny mitafy ny kodiarana fikosoham-bary. Ny fanapahana - amin'ny fomba fitotoana dia mety amin'ny fikolokoloana volo lehibe sy ny fikolokoloana kofehy mifatotra.
Dimy, fitotoana kofehy
Mba hanatsarana ny fitovian'ny volon-koditra, ny fitaovana fikosoham-bary misy karazana voanjo na visy dia vita amin'ny vy vy sy fitaovana malefaka hafa, ary ireo faritra misy hadisoana avy eo amin'ny tohotra dia ahodina ary alefa amin'ny lalana tsara sy ratsy. ny kofehy anatiny dia matetika ihany koa nokosehina mba hamongorana ny fanodikodinana ary hanatsara ny marina.
Fikitihana sy fametrahana
Ny fikitihana dia ny fampiasana tora-pasika iray hanodinana ny paompy ao ambanin'ny lavaka ambany alohan'ny hametahana ilay sangan'asa mba hikarakarana ny kofehy anatiny.
Ny tariby tariby dia ampiasaina hanapahana ny kofehy ivelany amin'ny bara (na fantsom-pitaovana) miaraka amin'ny maty. Ny fahamendrehan'ny fametahana na ny tanan'akanjo dia miankina amin'ny fahamendrehan'ny paompy na maty. Na dia maro aza ny fomba fanodinana kofehy anatiny sy ivelany , ny savaivony anatiny misy savaivony dia azo zahana amin'ny alàlan'ny fanoratana fotsiny. Ny fikikisana sy ny fanakonana dia azo atao amin'ny tanana, na amin'ny alàlan'ny lathes, milina fanodinana, milina fanoratana ary milina manaloka. miaraka amina loha mihodina mihodina. Izy io dia mety amin'ny famokarana betsaka ny kofehy ivelany misy ny fasteners mahazatra sy ny kofehy hafa.
Ny savaivony ivelany misy kofehy mihodina amin'ny ankapobeny dia tsy mihoatra ny 25 mm, ary ny halavany dia tsy mihoatra ny 100 mm. Ny fahamendrehan'ny kofehy dia mety hahatratra ny kilasy 2 (GB197-63). Ny savaivon'ny banga dia mitovy amin'ny savaivony antenantenin'ilay kofehy hozahana. amin'ny savaivony), ny fitsipika miasa dia mitovy amin'ny fikitihana. Ny torsion tadiavin'ny fitrandrahana mangatsiaka ny kofehy anatiny dia manodidina ny in-1 lehibe kokoa noho ny fikikisana, ary ny marin-tariby sy ny kalitaon'ny haavony dia somary avo kokoa noho ny mitendry.
Ny tombony azo amin'ny famolavolana kofehy dia:
(1) Ny hamafin'ny rano dia ambany noho ny fihodinana, fikosoham-bary ary fikosoham-bary;
(2) ny habaky ny kofehy aorian'ny mihodina dia afaka manatsara ny tanjaka sy ny hamafin'ny asa mafy noho ny hatsiaka;
(4) ny famokarana dia avo roa heny raha oharina amin'ny fizotran'ny fanapahana, ary mora azo ny mandeha ho azy;
⑤ Ny maty mihodina manana fiainana lava. Na izany aza, ny kofehy mihodina dia mitaky ny hamafin'ny fitaovam-piasana tsy hihoatra ny HRC40; avo kokoa ny fepetra takiana amin'ny haben'ny banga; avo lenta ihany koa ny fahamendrehana sy ny hamafin'ny mihodina mihodina. Sarotra ny manamboatra ny maty. Tsy mety amin'ny kofehy mihodina amin'ny mombamomba ny asymmetrika. Araka ny maty hafa mihodina, ny kofehy mihodina dia azo zaraina amin'ny sokajy roa: ny familiana visy sy ny familiana tariby.
Ny fikororohana dia vodin-tsolika roa miaraka amina endrika nify mihetsiketsika 1/2 pitch, ny plastika miorina dia ny plastika mihetsika mifanaraka amin'ny lozisialy static mamerina mihetsika. Rehefa alefa eo anelanelan'ny takelaka roa ny fitaovana, ny mandroso lovia manosotra ny workpiece, ka ny ambonin`ny plastika deformation ho kofehy.
Misy karazany telo ny tariby mihodina: tariby mihodina, radika mihodina ary tariby mihodina.
(1) Ahodin-tariby mihodina: 2 (na 3) kodiarana mihodina miaraka amina endrika nify dia apetraka amin'ny hazo mifanila amin'izy samy izy, apetraka eo amin'ny tohana eo anelanelan'ny kodiarana roa ny kodiarana, ny kodiarana roa dia mihodina amin'ny lalana iray ihany ary amin'ny hafainganam-pandeha mitovy ihany, ary ny iray amin'ireo kodia dia ampiasaina ihany koa ho an'ny fivezivezena fahana radial. Mihodina eo ambanin'ny alàlan'ny famolavolana tariby ny fitaovana, ary aondrana any ivelan'ny radial ny endriny mba hanamboarana kofehy. miaraka amin'ny marina ambany.
(2) tariby mihodina tangente: fantatra amin'ny anarana hoe tariby mihodina amin'ny planeta, ny fitaovana mihodina dia misy kodiarana mihodina afovoany sy takelaka tariby miolakolaka telo. ny fihodinanan'ny visy sy ny familiana tariby.
③ Loha mihodikodina: izy io dia tanterahina amin'ny lathe automatique, izay matetika ampiasaina hanodinana ny kofehy fohy amin'ny workpiece. mihodina ny sangan'asa, mihinana axial ny loha mihodina, ary ahodina avy ao amin'ny kofehy ilay sangan'asa.
Fotoana fandefasana: Mey-08-2021